Ijoo Dubbii Adda Bilisummaa Oromoo Kabajaa Ayyaana Irreechaa kan Bara 2019 laalchisee |
Home Afaan Oromoo Ijoo Dubbii Adda Bilisummaa Oromoo Kabajaa Ayyaana Irreechaa kan Bara 2019 laalchisee
Adda Bilisummaa Oromoo, September 19, 2019
Gita bittootni mootummoota Itoophiyaa guddinna qofa osoo hin taane, jabeenya saba Oromoo waan hubataniif eenyummaa, aadaa, afaanii fi amantii isaa irratti duula guddaa godhaa turan. Aadaa, afaanii fi amantii saba kanaa balleessuuf tooftaan isaan hin godhin jiru. Mootummootni dhufaa fi dabraan Itoophiyaa, seera baafatanii, Oromoon aadaa isaatiin akka hin boonnee fi hin dagaagiffanne cunqursa hammi isaa himamuu hin dandeenyetu saba keenya irratti godhamaa ture. Sirni Gadaa fa’a “aadaa boodatti hafaa” jedhamuun farrajamee, sabni keenya aada isa addabaabayitti akka hin kabajane, dhiibbaa cimaatu godhame. Bara afaan Oromoo Raadiyoo cabsa jedhame irraa kaane, har’a sadarkaa aadaan keenya ifatti kabajachuu fi dagaagiffachuu bira kutnee, sadarkaa aadaan keenya hambaa addunyaa ta’e irra geennee jirra.
Irreechi ayyaanota Oromoon kabajatu keessa guddicha. Guyyaa ayyaana kanaatti, Oromoon Waaqa isa uumeef galata guyyaa itti galchu. Faranjiinis afaan isaaniitiin “Thanksgiving day” jedhanii woggaa woggaatti biyyoota heddu keessatti kabajatu. Ayyaanni kun Oromoof garuu guyyaa Waaqa isaa itti galateeffatu qofa osoo hin taane, haala cunqursaa keessa dabre irraa ka’uun yoo ilaalle, guyyaa diddaa gabrummaa itti mul’isu, guyyaa hafuura Oromummaa itti jabeeffatu, battalti Irreechas battala bilisummaa itti fuunfatan jechuun ni danda’ama.
Kanaaf, Irreechi Oromoof sabboonummaadha; bilisummaadha; eenyummaadha; duudhaadha; aadaadha. Sababa kanneeniifis, Oromoon kallattii hundaa wol yaamee tuutaan, sirna cunqursaa saniif osoo hin jilbiiffatni ayyaana kana Hora Arsadeetti kabajachaa ture. Irreecha yoo yaadannu, ammoo godaanisa yeroo hunda qalbii Oromoo keessaa hin badnetu jira. Innis bara 2016 ayyaana Irreecha Hora Arsadee, Bishooftutti kabajame irratti, Shiftootnii fi jaallotni Woyyaanee lubbuu namoota dhibbaatamaan laakkawwaman al-tokkotti nu jalaa galaafatan. Gubbaan Xayyaaraan boombii aaraatiin, jalaan ammo rasaasaan daqiiqota muraasa keessatti lubbuu namoota heddu galaafatanii, heddu ammo madoo fi qaama hir’uu taasisanii jiru. Irreechi yoo dhufu bara baraan Oromoon gocha sukkanneessa ilmaan isaa irratti raawwatame kana yaadata. Gochi akkasii sun akka hin deebineef qaamni Mootummaa nageenya eegsisu gaafa duraa qaba jennee amanna.
Gama biraatiin, osoo koloneeffatootni moototni Habashaa handhuura Oromiyaa, Finfinnnee irraa Oromoo hin buqqisni dura, Oromoon Hora Finfinneetti wol gahee ayyaana kana kabajachaa ture. Habashootni battala Oromoon itti wolgahutti, ta’e jedhanii, yoo fedhan mana amantii irratti ijaaratu, yookaanis maqaa misoomaatiin battala inni itti waaqeffatu irraa fudhatu. Horri Finfinnees shira kana fakkaatuun, Oromoon battala sanitti akka hin irreeffanne shiraan irraa fudhatame; ni dhorkames. Dhiibbaa, gidiraa fi shirri kun hundi Oromoon qawwee kaasee, dhaaba isaa ABO jalatti of ijaaree, qabsoo akka finiinsu gahee guddaa taphate. Baroota afran dabran keessatti ammo sochiin qeerroo fi qarreen godhan qabsoo finiinsuun fooyyee amma argame fidee jira.
Sabni keenya fooyyee argame kanatti fayyadamee aadaa fi duudhaa isaa dhabamuu gahe, deebifatee kunuunfachuun dirqama lammii Oromoo maraati. Ayyaanni Irreechaa baranaa kun ammoo seena qabeessa. Ayyaanni baranaa kun qabsoo hadhooftuu ilmaan Oromoo godhaniin turtii woggoota 150 booda yeroo jalqabaatiif Hora Finfinneetti kabajama. Arma dura Oromoon Hora kanatti akka irreeffataa ture seenan ni hima. Dabalees, ayyaanni baranaa kun yeroo Nafxanyootnii fi leellistootni sirna dulloomaa abbummaa Finfinnnee abjootanitti Hora kanatti kabajamuun isaa seena qabeessa isa taasisa. Gocha diina kanas ABOn cimsee akka dura dhaabbatu ibsa.
Galtee shiftootnii fi jaallonni Woyyaanee bara 2016 Bishooftutti ilmaan Oromoo irratti raawwatan kan itti yaadannu ta’a. Finfinneen jaarraa tokkoo oliif alagoomaa, Oromoo buqqisaa, Oromiyaa dhiphisaa, ofii guddachaa magaala asi geette. Magaala tun amma boodaa haadha isii Oromiyaa dhiiba, Oromoo buqqisaa, alagoomaa akka babal’achuu hin dandeenye, foolii Oromummaa keessatti biifuu fi tindhisuu barbaachisa. Amma booda magaalaan tun, alagoomaa, Oromoo dhiibaa, babal’achuu akka hin dandeenye firaa fi diinatti carra kanatti fayyadamanii himuun murteessaadha.
Kanaaf, ilmaan Oromoo hundi, dhiiraa fi dubartiin, qeerroo fi qarreen, manguddoon, hayyootni, Abbootiin Gadaa fi abbootiin amantii hundi guyyaa ayyaana irreecha bara kanaa irratti argamuun ilmaan Oromoo woreegaman yaadachaa, kan qaama miidhaman ammo humna qabnuun gargaaraa, Waaqa dukkana keessaa nu baase, ifa nu garsiise galateeffachaa ayyaana kana akka kabajnu Addi Bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarsa.
Guyyaa ayyaanaa ummatni keenya wol ijaaruun, nageenya wolii eeguun, naamusaan waaqeffatee galuun barbaachisaadha. Oromoon “tika nagayaan gale, aannan dhugan’’ jedha mitii ree? Gama biraatiin, sabaaf sablammootnii fi daawwatootni (tourists) biyyoota addunya garagaraa irraa ayyaana kana irratti ni argamu jedhamee eeggama. Tuuta kanaaf jaalala Oromummaa kennuunii fi duudha saba keenya hubachiisuun amaanaa lammii Oromoo hunda irraa jiru ta’uu hubachuun barbaachisaadha.
Previous articleBBC Afaan Oromo: Hidhamtooni Sanqallee gidiraa isaani irraa gahee, ibsan
Next articleTarkaanfii Ijibbaataa OPDO Tibbanaa